4Wooden Fish Waterfront House - I-Airbnb
Indawo: Idolophu yakudala, kwimpuma yeKoh Lanta, eKrabi.
I-4 Wooden Fish Waterfront House ibekwe ekupheleni kwesitrato kwi-Old Town, eKoh Lanta, eKrabi. Indlu yamaplanga yakhiwe phezu kwezibonda phezu kolwandle. Iimbono zepanoramic kwaye zihlala zitshintsha njengoko amaza esiza kwaye ehamba.
Kukho igumbi lokulala elahlukileyo kunye nendawo yokuhlala yangaphakathi kunye nesithuba esingaphandle kunye neebhalkhoni kwicala lolwandle kunye necala lesitrato.
Indawo encinci yekhitshi eyahlukileyo ene-oveni, ihob ikuvumela ukuba ulungiselele ukutya ngexesha lakho lokuphumla
I-4 Wooden Fish Seafront House ine-terrace yabucala kwindlu engaphambili enojingi oluncinci iza kunye nehlathi. I-4 Wooden Fish Seafront House ihleli kuLwandlekazi lwase-Andaman ngombono omangalisayo wepanorama yolwandle oluhlala lutshintsha ulwandlekazi kunye neziqithi eziselumelwaneni.
Akukho AC kwindlu yonke.
Njengoko i-4 Fish ibekwe phantse ekupheleni kwesitrato (izindlu ezi-2 ezongezelelweyo kunye nolwandle) ngoko kunzima ukuphazamisa. Ngokuqinisekileyo uya kufumana uxolo, amaxesha eclam ngelixa uhlala nathi.
Siyavuya ukudibana nawe ekungeneni kwakho kwaye sikunike ulwazi oluthe kratya malunga nendlu yethu kwaye sikubonise kwindawo yokuhlala, sinika iinkcukacha ezithe vetshe malunga nesiqithi, indawo yokuhlala, kunye nohambo lwesiqithi esikufuphi. Kwaye ngexesha lokuhlala kwakho nathi ukuba unazo naziphi na iingxaki eziphazamisayo siyakuvuyela ukukunceda njengesiqhelo.
Siyavuya ukudibana nawe ekungeneni kwakho kwaye sikunike ulwazi oluthe kratya malunga nendlu yethu kwaye sikubonise kwindawo yokuhlala, sinika iinkcukacha ezithe vetshe malunga nes…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Lanta Yai